Apple wuxuu sii wadaa inuu saxiixo macruufka 12.4, nooca iOS-ka ee ku habboon JAILBREAK | Wararka IPhone
Apple wuxuu sii wadaa inuu saxiixo macruufka 12.4, nooca iOS ah ee la jaanqaadi kara JAILBREAK
Maalmo ka hor, raggii ka socday Cupertino ayaa bilaabay cusbooneysiinta macruufka 12.4.1, oo ay kicisay dhibaato amni oo la ogaaday iyo taas ka dhigay qalabka macruufka nugul ka hor iPhone XS, XS Max iyo iPhone XR oo loo yaqaan 'jailbreak'. Isla mar ahaantaana, cilladdan amniga ah ayaa lagu hagaajiyay sii deynta iOS 12.3.
Si kastaba ha noqotee, markii la sii daayay macruufka 12.4, cilladdan amniga ah ee qalabka ka dhigtay mid u nugul in la jabiyo, mar labaad baa la helay. Ilaa maanta, markii in ka badan toddobaad ay ka soo wareegtay markii la sii daayay macruufka 12.4.1, nuqulkii hore, macruufka 12.4 wali waxaa saxeexaya server-yada Apple.
Sababta ay Apple u sii wadayso inay saxiixdo macruufka 12.4 lama garanayo, laakiin si gaar ah ayey u kacsan tahay. Halka ay run tahay taas JAILBILAX wuxuu joojiyay siduu ahaa dhowr sano ka hor, wali waxaan ka heli karnaa bulsho aad u firfircoon arimahan, in kastoo macquul ahaan aysan u balaarneyn sidii waagii hore.
Intaa waxaa sii dheer, Apple wuu ogyahay taas dadka isticmaala waxay qiimeeyaan amniga in qalabkaagu uu iyaga siin karo oo aysan rabin inay wax u dhimaan wakhti kasta iyaga oo adeegsanaya codsiyo dhinac saddexaad ah oo khatar gelin kara ma aha oo keliya amniga aaladooda, laakiin sidoo kale hawlgalka xaruntooda.
Marka ay timaado arrin weyn oo xagga amniga ah, oo saameyn ku yeelata malaayiin isticmaaleyaal ah adduunka oo dhan, Apple waxay si deg deg ah u sii deysaa cusbooneysi cusub dhowr saacadood ka dib joojinta saxiixa noocyadii hore kuwaas oo u nugul dhibaatada la ogaaday.
Xaaladdan oo kale, dhibaatadu waxay u muuqataa inay tahay waxay kaliya saameyneysaa awooda JAILBREAK qalabka oo aan ku lug lahayn wax dhibaato amni ah oo saameyn ku yeelan kara xogta la keydiyay, sidaa darteed, illaa maanta, ragga ka socda Cupertino waxay sii wadayaan inay saxiixaan macruufka 12.4 nooca iOS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Apple wuxuu sii wadaa inuu saxiixo macruufka 12.4, nooca iOS ah ee la jaanqaadi kara JAILBREAK
Jiilka labaad ee iPhone XR wuxuu lahaan doonaa 1 GB RAM dheeri ah